Indlela Yokwenza ii-Creative Magazine Covers: Iimpawu zoyilo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Fashion united
Nanini na xa sifuna uhlobo oluthile lokuzonwabisa, sifumana enye ebonakala ngathi ikuzo zonke iikona zeendawo ezahlukeneyo: iikhefi, iihotele, abalungisi beenwele, njl. Sizifunda ngenxa yomxholo ezinawo okanye ngenxa yokuba ingqalelo yethu iye yatsalwa kokubini sisigidimi kunye nendlela esidlulise ngayo.
Ukuba usazibuza ukuba sithetha ngantoni, alithandabuzeki elokuba ngamaphephancwadi. Ewe, yintoni esinomdla kakhulu kuwe ukuba ufunde kule post? Ewe, Siza kukwazisa kwakhona kuyilo lomhleli kwaye, siza kukuntywilisela kwihlabathi elimangalisayo lemagazini.
Yiyo loo nto kule posi sichaza into abayiyo kwaye siya kucebisa ezinye iingcebiso zokuyila elona qweqwe loyilo kunye nobugcisa bemagazini. Ukuba ulungile, masiqalise.
1 Le magazini
1.1 Umlando omncinci
1.2 Iimpawu ngokubanzi
1.2.2 Iintlobo ngeentlobo
1.3 amanqaku emagazini
2 Yenza ikhava yokuyila
2.0.1 Ukuba imfutshane, ingcono
2.0.2 Yenza iimvavanyo ezahlukeneyo
2.0.3 Sebenzisa izixhobo zoyilo
2.0.5 Yenza iimvavanyo zokuprinta
Le magazini ichazwa njenge indawo yentengiso ngaphandle kweintanethi kwaye ngoku ikwi-intanethi, ekubeni ngenkqubela phambili yeteknoloji iye yakwazi ukwenza amaphephancwadi ngokusebenzisa iinkqubo zombane: iipilisi, iikhomputha, njl. Kodwa ngaphezu kwako konke, ikwachazwa njengenye yeendlela zokuqala zoshicilelo okanye indlela yoshicilelo.
Umsebenzi wayo ophambili ngulo yazisa kwaye uthumele umyalezo kumamkeli, othi kulo mzekelo ungumfundi wephephancwadi. Sithetha nje kukho iindidi ezininzi zamaphephancwadi, ngalinye lihlelwa ngokohlobo lwalo okanye ngoko aludlulisela kwabanye.
Iphephancwadi njengoko silazi Isuka kumazwe afana neJamani, iFransi kunye ne-Italiya ngo-1663. Amaphephancwadi ayengawona manqaku abalaseleyo ezihlangwini zamaphephandaba awayesele ekho ngelo xesha yaye ayengamaziko entengiso okuqala ashicilelweyo.
Ukutyhubela imbali, iimagazini ziye zaba yeyona ndlela isetyenziswa kakhulu njengoko ibiyindlela elungileyo yokuzonwabisa nokuhlala benolwazi. Yiloo nto, ngamaxesha emfazwe, iintsapho zamajoni awayenenxaxheba emfazweni zazihlala zisazi ngenxa yolu hlobo lwempapasho.
Nangona kunjalo, namhlanje bahlala bengomnye weendaba ezibalaseleyo.
Iimagazini ziqulethe uluhlu lweempawu eziqhelekileyo ezibanika ubuntu obuyimfuneko ukuze babe ngomnye wemithombo yeendaba esetyenziswa kakhulu kuluntu lwanamhlanje.
Yintoni ephawula iimagazini kakhulu kukuba kukho iindidi ezininzi zabahleli ababhala ulwazi oluyimfuneko ukuze uluntu lukwazi kuphela ukubamba ulwazi oluludingayo, oko kukuthi, umyalezo kufuneka ucace kwaye ube mfutshane kwaye kufuneka uqale ukusuka kwisihloko sokuqala ukuya kwinqanaba kunye nesiphelo sesiqendu sokugqibela.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ziqulethe ngaphezulu kwe-typology enye kwaye kuxhomekeke kwindlela ezikuyo, ziya kufikelela kubaphulaphuli abahlukeneyo okanye enye. Yingakho kukho iimagazini malunga nezilwanyana, malunga noluntu lwanamhlanje, malunga nezemidlalo, i-cinema kunye ne-audiovisuals, ukuyila kunye nobugcisa, iteknoloji, njl. Ngamnye kubo uyilwe ngendlela eqondwayo kwaye iwufanele kakhulu umlinganiswa wesihloko esiza kuphuhliswa.
Yintoni umyili okanye umbhali azama ukuyenza, Ngokuqinisekileyo itsala umdla woluntu Kwaye bangayenza njani ngomyalezo olula? kuba kukho iifom ezininzi, umyili uya kubhenela kwizinto ezibonakalayo zegraphic ezenza uyilo: ii-typographies, imifanekiso, imifanekiso, i-abstract okanye iifom ze-gestural, imigca yegraphic, njl. Ngoxa umhleli uya kuba noxanduva lokufumana isihloko esiqokelela lonke ulwazi oluya kuboniswa ngaphakathi kwiphephancwadi yaye luya kuluguqula lube ligama elinye okanye amabini. Kucetyiswa ukuba umxholo ube mfutshane kangangoko njengoko usiba mfutshane, kokukhona uthimba ingqalelo ngakumbi kumfundi.
Ukuyila iphephancwadi, kuyimfuneko ukuba uthathele ingqalelo inqaku ngalinye lephephancwadi, ngenxa yoko, senze uluhlu olufutshane kunye nezona zibalaseleyo kwaye zikhoyo kwiimagazini namhlanje.
Izihloko nezihlokwana: Isihloko kunye nemibhalo engezantsi iya kuba yinto yokuqala ebonwa luluntu njengoko ibekwe kuqweqwe lwemagazini. Ngokuqhelekileyo zifutshane kwaye zilula. uze ushwankathele umxholo weli phephancwadi ngamazwi ambalwa. Okuncinci kungcono.
Ukubala kunye nomhla: Kubalulekile ukuba onke amaphepha abalwe kuba ngale ndlela umbukeli akalahleki phakathi kwabo kwaye Yiba nesalathiso malunga nendlela imixholo ehanjiswa ngayo kunye nendawo nganye kuzo. Umhla wokupapashwa usoloko uphezulu, nangona amanye amaphephancwadi ewubeka emazantsi. Ngumhla epapashwa ngawo iphephancwadi.
Igama lomhleli kunye ne-bibliographies: Igama lomhleli libalulekile kuba nguye ophetheyo ekuyileni iphephancwadi kunye nemixholo yalo, ngoko, ithathelwa ingqalelo kwaye idla ngokufumaneka ngoshicilelo oluncinci kwezinye iikona okanye phezulu.
Izinto zegraphic: Yenye yezona zinto zibalulekileyo kuba ziyinxalenye yomsebenzi womyili, inoxanduva lokusasaza ezi nxalenye kwiphephancwadi ukuze batsale uluntu. Ezi zinto zivela kuchwethezo, imifanekiso, imizobo, iimilo zejometri, njl.
Yenza ikhava yokuyila
Kweli candelo leposi, siza kukubonisa iingcebiso onokuthi uzigcine engqondweni xa uyila isigqubuthelo. Yiyo loo nto kuyimfuneko ukuba uzithathele ingqalelo kuba zisisiseko sohlelo lwangoku kunye noyilo lwegraphic.
Ukuba imfutshane, ingcono
Njengoko besesichazile ngaphambili, yonke into enento yokwenza nokubhaliweyo kufuneka ibemfutshane ngokusemandleni, njengezilogeni kwintengiso, kufuneka zilandele ipateni efanayo xa kuyila isihloko esihle, A. Isihloko esitsala umdla wababukeli Kwaye musa ukulahleka kulwazi oluninzi. Yiyo loo nto kucetyiswa ukuba ungagqithi kumagama amathandathu ayimfuneko.
Yenza iimvavanyo ezahlukeneyo
Njengaye nawuphi na umyili, kufuneka wenze imizobo eyahlukeneyo yayo yonke into oyenzayo, nokuba zizihloko, njengakukhetho lweefonti okanye uvavanyo lombala. Ungaqalisi kwi-adventure ngaphandle kokuzama iindlela ezahlukeneyo zokukhetha. Umzekelo, ekukhetheni iifonti, Kuyimfuneko ukuba ubuncinci, wenze imidibaniso yeefonti ezimbini okanye ezintathu zoyilo olwahlukileyo kwaye wenze imizobo yokuqala elishumi iyonke. Nje ukuba unazo, uzilahle kubini ngambini njengoko uzibuza ngengqondo kwaye uphendule imibuzo esisiseko: yintoni abayihambisayo, bayihambisa njani, kutheni beyihambisa.
Sebenzisa izixhobo zoyilo
Umthombo: Mobile top
Xa sithetha ngezibonelelo, sithetha ukuba usebenzisa iinkqubo zoyilo ezifanelekileyo kuyilo umhleli, oko kukuthi, ikuvumela ukuba ubeko ngokuchanekileyo amaqweqwe kwaye ngexesha lokuwathumela ngaphandle, nokuba yeyiphi na ifomathi, isilungisi seprofayile yombala kunye nemo yoshicilelo echanekileyo ithunyelwa ngaphandle. Ngesi sizathu, sicebisa ukuba usebenzise inkqubo yeenkwenkwezi, i-InDesign. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngale nkqubo, siyakumema ukuba ufunde ezinye zezithuba zethu apho sithetha ngokukodwa ngale nkqubo kunye neempawu zayo. Ngamafutshane, khetha inkqubo echanekileyo.
Kwizavenge ezidlulileyo, sikuxelele ukuba iigridi zisinceda ukuba sisasaze ngcono kwaye silungelelanise izinto esiza kuzibandakanya kwikhava yethu. Kwaye kuyinyani, ekubeni baqinisekisa ukuba ngamnye wabo ulungelelaniso olubonakalayo olugqibeleleyo kwaye ngale ndlela bakha ingqiqo kunye nokulinganisela kumbukeli. iireticles se Zisenokwenziwa kwiinkqubo ezifana ne-InDesign okanye i-Illustrator. Ukongezelela, kukho iintlobo ezininzi zeegridi, into ebalulekileyo kukuba wenze kwakhona imizobo yegridi ehlukeneyo, kuxhomekeke kwindlela yokuyilwa kwephephancwadi lakho, ngale ndlela uya kukhangela ukuba isebenza okanye cha.
Yenza iimvavanyo zokuprinta
Sifumana izoyiko ezininzi xa ngequbuliso sifuna ukushicilela iphephancwadi lethu size siqonde ukuba asikhethanga indlela yokushicilela efanelekileyo okanye sibonise imo engafanelekanga kumshicileli wethu. Yiyo loo nto phambi kokuba unike imvume yokuya phambili, ukwenza iimvavanyo ezahlukeneyo zoshicilelo, kubaluleke kakhulu ukuba awukayazi ihlabathi leenkqubo zoshicilelo kunye neempawu zabo. Ngale ndlela uphepha iingxaki ezinkulu kwaye udale iiprojekthi eziyilwe ngokuchanekileyo.
Ukongeza, unokuhlala ubuza inkampani yakho yoshicilelo ukuba yeyiphi eyona ifanelekileyo ngamaxesha onke phambi kokuthatha nawaphi na amathuba.
Xa siyila iphephancwadi, simele sicinge ngento nganye eyilwayo, kungoko singenakuyila into ngaphandle kokwazi ngayo. Ukuba iphephancwadi alibambi ngqalelo zisuka nje libonwe okokuqala, indlela eliyilwe ngayo isenokuba ibingachanekanga okanye ibingalindelwanga kakhulu.
Kubalulekile ukuba wazi uyilo lwemagazini kakuhle ngaphambi kokuba uqalise ukwenza eyakho kwaye ngaphezu kwakho konke ukhuthazwe luyilo lwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uwenza njani amaqweqwe emagazini oyilayo
Uyila njani kwi-Word